Fiber Optical gudzazwi Vagadziri & Vatengesi | China Fiber Optical gudzazwi Factory
1550nm Mini Optical gudzazwi (ZOA1550MA)
1.Iyo pombi laser neiyo optical module uye iyo er-doped fiber inotorwa kubva kuUSA. 2.Muchina wacho une yakakwana uye yakavimbika magetsi emagetsi kuburitsa, kudzikamisa dunhu uye laser thermoelectric inotonhorera tembiricha yekudzivirira wedunhu inovimbisa mashandiro akanaka emuchina wese uye hwakagadzikana hupenyu hwakareba hweiyo laser 3.Muchina wakavakira-mu microprocessor software, ne laser nyika yekutarisa, kuratidzwa kwedhijitari, kunyevera kwekukanganisa, manejimendi manejimendi uye mamwe mabasa. Kamwe iyo inoshanda para ...
Mid-nhanho Kuwana EDFA (ZOA1550MC)
Zvimiro 1.Adopts JDSU kana Oclaro pombi laser 2.Adopts OFS fiber 3.SMT yekugadzira maitiro ekuvimbisa diki saizi uye yakaderera simba comsuption, asi yakakwira kugadzikana 4.Micro auto tarisa pcb 5.Output inogadziriswa (-4 ~ + 0.5) 6. Max zvinobuda 23dBm (imwechete pombi laser) Dhizaini Yekunze: Kumusoro (Chikamu: mm) Pini Kugovera Pini # Zita Tsananguro Cherekedza 1 + 5V + 5V ower supply 2 + 5V + 5V ower supply 3 + 5V + 5V ower supply 4 + 5V + 5V kupihwa magetsi 5 Reserve No Kubatana ...
1550nm Erbium Doped Fiber gudzazwi ZOA1550HW
ZOA1550HW akateedzana akakwirira emagetsi imwe mode mode EDFA inozivikanwa neruzha ruzha, yakakwira linearity. Vaka-mune-inoitwa-yakanaka CWDM yakasanganiswa 1490nm / 1310nm dhata yekuyerera kubva ku OLT uye ONU kuita imwechete fiber kutapurirana kuburikidza neEDFA, ichideredza chikamu chekuverenga uye kugadzirisa mashandiro ehurongwa uye kuvimbika. Iyo inopa inochinjika, yakaderera-mutengo mhinduro yeCATV yakakura nzvimbo kufukidzwa kwemadhorobha uye epakati-akakura maguta. ZOA1550HW dzakateedzana dzakashongedzwa neakapedza APC, AGC, ATC kutonga, yakanakisa dhizaini ye ...
Raman Optical gudzazwi ZRA1550
Erbium-doped fiber amplifier (EDFA), nekuda kwekumisikidza (ASE) ruzha uye macascades, kuunganidzwa kwerunyararo ruzha, kuchaderedza zvakanyanya SNR yeanogamuchira system, nekudaro inoganhurira iyo system kugona uye isiri-relay daro. Chizvarwa chitsva cheRaman fiber gudzazwi (ZRA1550) chinozadzikisa kukwidziridzwa kwechiratidzo che optical neyakawanikwa pfuma inogadzirwa neiyo Yakasimudzirwa Raman yekuparadzira (SRS). FRA ine yakafara kuwana chakasarudzika; iyo bandwidth yekuwana inogona kuwedzerwa ne th ...
Kunze Erbium-Doped Fiber Amplifier ZOA1550W
ZOA1550W dzakateedzana 1550nm Erbium Doped Fiber Amplifier (kunze-musuwo) ndeyekuisa chikumbiro, inotora 980nm kana 1480nm yakakwirira linearity, Optical isolation, iyo DFB, thermoelectric kutonhora DFB laser inogadzirwa neJDS-U, Fujitsu, Nortel, Lucent, Fitel nevamwe makambani anozivikanwa epasirese semiconductor semhepo yekupomba. Mukati memuchina wakagadzirwa neinobuda Optical simba kugadzikana wedunhu uye laser thermoelectric kutonhora mudziyo, tembiricha kudzikama kudzora wedunhu kuona Opt ...
CATV Optical gudzazwi Module
ZOA1550MB CATV EDFA module inotora yakajairwa vhezheni yeSingle Channel uye yakatetepa. Iyo EDFA inosanganisira inotonhorera pombi laser, yekuisa tarisa uye yekuisa wega, inoburitsa tarisa uye inoburitsa yega, compact size 90X70X20mm package. Yevashandisi-inoshamwaridzika makumi matatu-pini interface inosanganisirwa kugonesa iyo mudziyo kuti utaure neyakagadzika zvemagetsi. Zvimiro (1) Yakakwira mhando: inotora yepasi rose yakashongedzwa 980nm pombi laser, yakagadziridzwa software yesimba, kuwana uye kumeso maficha, ayo anovimbisa yakaderera NF uye ...
1550nm Erbium Doped Fiber gudzazwi ZOA1550H
ZOA1550H EDFA inotora makambani eJDSU, maLumics nemamwe makambani anomiririra semiconductor senzvimbo yekupomba. Mukati memuchina wakagadzirwa neinobuda Optical simba kugadzikana wedunhu uye laser thermoelectric kutonhora chishandiso, tembiricha kudzikama kudzora wedunhu kuona yakanakisa muchina mashandiro uye hwakareba-hupenyu-laser kugadzikana. Iyo microprocessor software inoongorora iyo lasers 'inoshanda nyika, iyo VFD skrini inoratidza iyo inoshanda parameter. Kamwe iyo laser inoshanda parameter de ...
1550nm Erbium Doped Fiber gudzazwi ZOA1550
Tsananguro yechigadzirwa ZOA1550 dzakateedzana simba chinogadziriswa erbium doped fiber gudzazwi yakagadzirirwa zvakanyanya maCATV network. Nekuda kweEDFA inoshanda wavelength ye1550nm, mukuenderana nefiber yakaderera kurasikirwa bhendi, uye hunyanzvi hwayo hwave hwakakura, inoshandiswa zvakanyanya. Tiri kutora JDSU, Fitel uye imwe inozivikanwa nyika semiconductor kambani yakaburitsa 980nm kana 1480nm pombi, iyo ine yakakwira linearity, Optical isolation, yakaparadzirwa mhinduro, thermoelectric Refriji DFB laser. Iyo EDF ...